China GDU mhando yesilicon carbide kudziyisa chinhu fekitori uye vagadziri | SICTECH
Hunhu hunokosha hweU mhando yesilicon carbide kudziyisa chinhu: U mhando yesilicon carbide yekudziya element inogadzirwa kubva kune maviri silicon carbide yekupisa element ine yakajairwa kutonhora kupera. U mhando yesilicon carbide yekudziya element inogona kubatanidzwa kune tambo yesimba kune imwe mugumo wevira. Iyo inowanzo shandiswa kune yakanyanya tembiricha mavira uye mavira ane akakwirira anodikanwa evhareji tembiricha tembiricha. Hunhu hwayo kuponesa kwesimba uye hupenyu hwakareba hwevira.
Iyo yesilicon carbide yekudziya element ichaita neakawanda makemikari zvinhu volatilized kubva kune akapfura zvinhu panguva yekupfura. Kana ikapindirana nemamwe magasi senge mvura, hydrogen, nitrogen, sarufa, halogen, uye aluminiyamu yakanyungudika, Kana alkalis, munyu, simbi yakanyungudutswa, uye oxides yesimbi akasangana, vanogona kuita, kukanganisa kana oxidize. Naizvozvo, zvakakosha kuti utore nzira yekushandisa chaiyo, iyo inowedzera kuwedzera hupenyu hwekushanda hwesilicon carbide yekudziya chinhu, pamwe nekupisa kwayo kwepamusoro nekukwirisa.
1. Iyo silicon carbide yekudziya element ine yakakwira michini simba, uye iyo yekukotama simba yakakwira se100-120MPa.
2. Iyo yepamusoro yepamusoro tembiricha inogona kusvika pamadhigirii gumi nemashanu
3. Yakakwira infrared radiation mwero, yakaenzana dhayamita yesilicon carbide yekudziya chinhu is 5-10 nguva dzakajairika nickel-chromium waya.
4. Hupenyu hurefu hwekushanda, kuiswa kuri nyore uye kugadzirisa.
5. Iyo silicon carbide yekupisa element ine yakasimba oxidation kuramba, yakasimba corrosion kuramba, uye ine yakanakisa thermal kuvhunduka kuramba.
Tinogona kugadzira saizi kubva patafura zvakare, ingo ndiudzei saizi yaunoda.
Dhayamita (D) HOT ZONE (L1) ZVAI NEMAHARA KUDZOKA (E) BRADGE Kuramba
Dhayamita (D) LONGL3
Pashure: GC mhando yesilicon carbide kudziyisa chinhu
Zvadaro: LS mhando (yakapetwa kaviri) yesilicon carbide kudziyisa chinhu
Electric Sic hita
Vira Rekupisa Zvinhu
Sic Heater Zvinhu
Spiral Sic Kuchenesa Zvinhu